Real Madrid oo Ku Guuleysatay Koobka Naadiyada Aduunka ee Fifa Club World Cup “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Real Madrid oo Ku Guuleysatay Koobka Naadiyada Aduunka ee Fifa Club World Cup “SAWIRRO”
Kooxda Real Madrid ayaa caawo ku guleeysatay koobka naadiyada aduunka ee Fifa Club World Cup,ka dib markii ay garoonka Marrakesh ee dalka Morocco 2-0 uga badisay kooxda San Lorenzo ooka socotay dalka Argentina.
Kooxda Real Madrid ayaa goolka la hor martay waxaana dhamaadkii qebytii hore ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Sergio Ramos,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Gareth Bale ayaa bilowgii qeybtii danbe ee ciyaarta u dhaliyay kooxda Real Madrid.
Kooxda Real Madrid oo uu hogaamiyo macalin Carlo Ancelotti ayaa koobkeedii afaraad ku guuleysatay sanadkan.
Kooxda Real Madrid ayaa badisay kulankii 22-aad oo xiriir ah dhamaan tartamada.
Kooxda Real Madrid ayaa horey ugu soo guuleysatay koobka naadiyada yurub ee Champions League-ga,koobka UEFA Super Cup-ka Yurub iyo koobka Copa Del Rey.
Eng.Axmed Macalin Fiqi oo isku sharaxay madaxweynaha maamulka gobollada dhexe”Daawo Sawirro”
Eng.Axmed Macalin Fiqi oo isku sharaxay madaxweynaha maamulka gobollada dhexe"Daawo Sawirro"